ငြိမ်းချမ်း| February 18, 2013 | Hits:12,935
| | မောင်တောမြို့တဘက်ကမ်းရှိ တာ့ခ်နာဖ်ဆိပ်ကမ်း (ဓာတ်ပုံ – Shahnoor Habib Munmun)
လဝက ထုတ်ပြန်သည့် လူဦးရေ စာရင်းသာ အတည်ဖြစ်မည်နိုင်ငံခြားသားများ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် စိစစ်ရေး ကော်မတီ ဖွဲ့မည်လူဦးရေ ၅၁ သန်းကျော်တွင် ပြည်ပရောက် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ မပါသေးအွန်လိုင်းဗီဇာ စနစ် လာမည့် စက်တင်ဘာတွင် စတင် ကျင့်သုံးမည်ARF အစည်းအဝေးမှာ တောင်တရုတ် ပင်လယ် နဲ့ နျူကလီးယား အရေး ဆွေးနွေး
hlaingoo February 18, 2013 - 7:47 pm What do you mean “မြန်မာ မွတ်စလင်” .
Reply Myo Nyunt February 18, 2013 - 11:22 pm နစကက အရင်လိုလဘ်စားပြီး လက်မခံပါနဲ့ နယ်စပ်
Reply Swe htwe February 18, 2013 - 11:43 pm They are not our citizens. They are returning to their original country,Banglandesh.
Reply MST February 20, 2013 - 2:25 pm ဘင်္ဂါလီဆုိုတဲ့သူတွေကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက မြန်မာဆုိုပြီးပြန်ပုို့နေတာကို မြန်မာအစိုးရကလည်း ဘာမှမပြောနုိုင်တော့ သူတုို့တွေက ဘင်္ဂါလီမှ ဟုတ်ရဲ့လား။ ဟုတ်တယ်ဆုိုရင် မြန်မာအစိုးရကရော ဘာဖြစ်လုို့ လက်မခံနုိုင်ဘူးလုို့ မပြောနုိုင်ရတာလဲ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက သူ့နုိုင်ငံသားဆုိုရင်ရော မြန်မာဆုိုပြီး ပုို့မလား။ အင်း… စဉ်းစားစရာတွေတော့ အပြည့်ပဲ။